China MILK BOTTLE MACHINE mpanamboatra sy mpamatsy | Tonva
1. Ity maodely ity dia asongadin'ireto: lohan'ny multi die, gara miisa roa ary famokarana avo. Ny hatevin'ny rindrin'ny tavoahangy isaky ny lava-bato dia natao na dia tamin'ny famolavolana loha famahanana eo afovoany aza, nokarakarain'ny ivon'ny milina CNC. 2.Machine dia mampiasa marika nohafarana ho an'ny singa hydraulic ary manamboatra valizy roa mitovy amin'ny fifehezana ny hafainganam-pandeha sy ny tsindry ataon'ny solika izay azo tantanana an-tserasera ihany koa. Mihetsika sy malama ny fivezivezena etsy ambony. 3.MOOG 100 Points Parison Controller System dia azo raisina hanatsarana bebe kokoa ny kalitaon'ny vokatra. 4. Ity maodely ity dia azo havaozina ho "Hybrid Type", ny ampahany amin'ny kalesin-tsoavaly izay natao miaraka amin'ny motera servo mba tsy hahatratra tabataba, fandidiana mora, toerana marina ary fifantohana haingana amin'ny bobongolo. 5.Machine dia azo noforonina hiara-miasa amin'ny sandry robot, conveyor, tester de leak, labozy miendrika bobongolo, milina fonosana sns sns arak'izay takinao.
Famaritana fototra Akora
Extrusion System Diameter an'ny visy
Isan'ny faritra fanafanana
Hery mitondra fiara Extruder
Die Head Faritra fanafanana
Clamping System Ny halaviran'ny clamping
Fanjifana herinaratra Faneren'ny rivotra
Fanjifana rano mangatsiaka
Herin'ny paompy solika
1. Ity maodely ity dia asongadin'ireto: lohan'ny multi die, gara miisa roa ary famokarana avo. Ny hatevin'ny rindrin'ny tavoahangy isaky ny lava-bato dia natao na dia tamin'ny famolavolana loha famahanana eo afovoany aza, nokarakarain'ny ivon'ny milina CNC.
2.Machine dia mampiasa marika nohafarana ho an'ny singa hydraulic ary manamboatra valizy roa mitovy amin'ny fifehezana ny hafainganam-pandeha sy ny tsindry ataon'ny solika izay azo tantanana an-tserasera ihany koa. Mihetsika sy malama ny fivezivezena etsy ambony.
3.MOOG 100 Points Parison Controller System dia azo raisina hanatsarana bebe kokoa ny kalitaon'ny vokatra.
4. Ity maodely ity dia azo havaozina ho "Hybrid Type", ny ampahany amin'ny kalesin-tsoavaly izay natao miaraka amin'ny motera servo mba tsy hahatratra tabataba, fandidiana mora, toerana marina ary fifantohana haingana amin'ny bobongolo.
5.Machine dia azo noforonina hiara-miasa amin'ny sandry robot, conveyor, tester de leak, labozy miendrika bobongolo, milina fonosana sns sns arak'izay takinao.
Teo aloha: MESINY FIVORIANA VOLOMBELO TVA 1000L- 10000L
Manaraka: MESIN'OTOTRA PESTICIDE
Modely amin'ny vozon'ny SBM manerana azy tanteraka
Servo mandeha ho azy SBM-maodely haingam-pandeha
MESINY FIVORIANA VOLOMBELOMA TVA 20L-500L